Fitsaram-bahoaka : milaza ho tsy mahita vahaolana ny Sendikàn’ny mpitsara | NewsMada
Fitsaram-bahoaka : milaza ho tsy mahita vahaolana ny Sendikàn’ny mpitsara
Mihanaka sy mitombo ny fitsaram-bahoaka tato ho ato. Inona ny vahaolana? Milaza ho tsy mahita ny Sendikàn’ny mpitsara…
“Tsy izahay izao no afa-kilaza fa mahita vahaolana amin’ny fitsaram-bahoaka. Vonona handray andraikitrra amin’ny fitadiavana vahaolana izahay. Amin’izao fotoana izao, tsy mbola misy mahafantatra hoe inona ny vahaolona.”
Io ny nambaran’ny filoha Sendikàn’ny mpitsara eto Madagasikara (SMM), Ernaivo Fanirisoa, teny Anosy omaly, taorian’ny fandraisany fahefana tamin’ny filohan’ny SMM teo aloha, Andrianjafimahery Alphonse.
Tsy maintsy mivoaka avy amin’ny fikaonandoham-pirenena ny vahaolana, hanatonana ireo olona mpanao fitsaram-bahoaka, mpanao Dina, mpitarika fitsaram-bahoaka, ny avy amin’ireo toerana tena isehoan’izany…
“Isika aty Antananarivo tsy mahalala ny toe-tsain’ny olona amin’ny toerana misy Dina: maso solon’ny maso, na tsy izany aza ny voalazan’ny lalàna”, hoy izy. Izay ve no masina aminy, izay no tokony hampiharina? Avy eo, iza no iharan’izany: izay voatondro molotra rehetra sa ny tratra ambodiomby?
“Tsy izaho no hitarika io fikaonandoham-pirenena momba ny fitsaram-bahoaka io, hitadiavana ny hoe: inona no mahatonga azy, inona ny vahaolana, iza no voakasik’izany… ?” hoy ihany izy.
Laharam-pahamehana ny fampahafantarana ny lalàna
“Laharam-pahamehana ny fampahafantarana ny lalàna”, hoy izy momba ny asa atrehin’ny SMM amin’izao fotoana izao, na tsy mbola fitakiana sendikaly aza izany. Eo koa ny fanatonana ny vahoaka amin’izany, ny fametrahana sata sy ny fitsipika anaty mifehy ny sendikà…
Hapetraka ny fanamby hampivondrona ny mpitsara rehetra hikatsahana ny tombontsoa hanatsarana sy hiarovana ny asa ao anatin’ny fitsarana. Amin’ny maha sendikà ny SMM, eo hatrany ny fiarovana sy fanohanana ny mpitsara tsirairay avy: fahaleovantena amn’izay mety ho faneriterena mahazo, fa efa akaiky izao ny fifidianana isan-karazany.
Mbola andrasan’ny SMM koa izay tohin’ny “Rahavarana Rehavana Michel”, taona 2011, tsy mbola vita hatramin’iizao.
Rencontres du film court RFC 2020 : Critiques 25/11/2020
9e art: la bande dessinée en fête à Antsiranana 25/11/2020
Cefom Maibahoaka : 40 journalistes en formation 25/11/2020
Ambondrona : l’album « Ho soa hatrany » sortira dans tout Mada, demail 25/11/2020
Mercredi des idées en goguette 25/11/2020